घर युरोपियन स्टार कलम हडसन ओडि बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल व्हीज बच्चालाई प्रस्तुत गर्दछ जसले सबै भन्दा राम्रो नामको रूपमा चिनिन्छ "Callum"। हाम्रो क्युम हडसन ओडि बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाइव्यापी तथ्यले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने घटनाको पूर्ण खाता तपाईको बचपनको समय सम्म। विश्लेषणमा आफ्नो प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रसिद्धिको अघि जीवन कथा, प्रसिद्धि कथा, सम्बन्ध जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन र अनियमित तथ्याङ्कहरू वृद्धि गर्न समावेश गर्दछ।
हो, सबैलाई थाहा छ उसले तुलना गरेको छ ईडन हजर्ड यसको विस्फोटक गति र ट्रिकरीको कारण। तर, केवल केहि केहि कलम हडसन ओडिडी जीवनी को विचार मा एकदम दिलचस्प छ। अब अनावश्यक बिना, सुरु गरौं।
तर, प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
सुरू गर्दै, उनको पूरा नाम हो कलम जेम्स हडसन ओडिडी। कलम 7th नोभेम्बर 2000 मा उनको आमाबाबु श्री श्रीमती र श्रीमती बिस्मिर्क ओडिलाई जन्मेको लन्डन बोरोको वन्ड्सवर्थ, संयुक्त अधिराज्यमा। उनी तीनजना केटाकेटीको दोस्रो छोराको रूपमा जन्मिएका उनको प्यारा आमाबाबुलाई जन्मिएको थियो।
कलम हडसन ओडिडीको परिवार गायन जडहरू छन् र यूकेमा उनको जन्मले विदेशी आमालाई आफ्नो दोस्रो छोरा जन्माउने आमाबाबुको निर्णयको परिणामस्वरूप आउँथ्यो। उनको उपनाम "Odoi " is घाना, पश्चिम अफ्रीका (फोरबियर रिपोर्टहरू) मा लगभग 23,278 व्यक्तिहरूको नाम।
हडसन ओडिडीले ठूलो ब्रेड ब्राडली हडसन ओडिडीलाई पराजित गर्यो जुन 12 वर्षको लन्डन बरोको व्यान्डवर्थ्टमा उहाँका वरिष्ठ व्यक्ति हुनुहुन्छ। साथै, उनको सानो भाइ जसको नाम अज्ञात छ।
हाम्रो अवलोकनबाट, यो स्पष्ट छैन कि हडसन ओडिडीको ठूलो भाइ ब्रैडली उनको आमाले जन्म दिएकी थिई कि उनी माथिको तस्विरको रूपमा धेरै युवा हुनुहुन्छ। तथापि, सबै भाइहरू शुरूमा उनीहरूका बुबा बर्मर ओडिलाई फुटबल खेल्न मन परेका थिए जसले उनीहरूको बेग्लै फुटबल फाउण्डेशनलाई आफ्ना छोराहरूलाई प्रदान गरे।
बिस्मिद ओडिआई एक पूर्व घानायन मिडफिल्डर हो जो अकरा, घाना मा एक खेल क्लब को दिल को खेला। फुटबल निश्चित रूप देखि भुक्तानी लाभांश को कलम को दृष्टान्त को रूप मा यो एक सफल परीक्षण र ब्लुज लंदन संग युवा कैरियर नामांकन को ट्रिगर।
तर, प्रारम्भिक क्यारियर
हडसन ओडि 2000 को उमेर मा7मा चेल्सी युवा अकादमी मा शामिल हो। हजसन ओडिडीले आफ्नो किशोर वर्षको उमेरमा बढाएपछि फुटबल ट्रिक्सहरू हासिल गर्ने कुनै पनि अन्य काम गरेनन् जसको अर्थ उनी आधुनिक दिन विङ्गरको आवश्यकता हो। उहाँको प्रारम्भिक कौशलको नमूना तल हेर्नुहोस्;
फुटबल चालकहरूले उसलाई पिचमा केही अजीबमा बदले। हडसन ओडिडीले आफ्नो रचनात्मक वर्षहरू चेल्सी युवाहरूको साथ मात्र अकाडेमी खेलाडीको रूपमा खर्च गरेनन्, तर एक फ्रिस्टाइलर जसले आफ्नो कडा मेहनत र धैर्य गर्न थाल्दछ जुन उनीहरूको चाँडो तल नै अनुमानित परिस्थितिहरूमा पाइन्छ।
तपाईंलाई थाँहा थियो?... बलको निरन्तर जग्गाले हडसन ओडिडीको बल नियन्त्रण कौशलको नेतृत्व गरे र उनको खुट्टाको गति गतिमा अन्ततः उनको खेलको शैली परिभाषित गर्यो।
आफ्नो लिङ्ग गतिमा प्रेरणामा बोल्दै हडसन ओडिओले भर्खरै क्यु ए ए ए भर्खरै भर्खरै भर्खरै भर्खरै भर्ना गरेकी थिइन्, उनीहरूका मूर्ति टोली साथी हुन्, ईडन हजर्ड र Willian (डेलीमेल रिपोर्ट).
तर, सडकको प्रसिद्धि
सफलताको स्वाद- ट्राफिक किशोर:
त्यसो भए पनि उहाँले 18 बदल्ने तीन महिना भन्दा बढी हुनुहुन्थ्यो, हडसन-ओडिसी चांदीवेयर इकट्ठा गर्न कुनै अजनबी थिएन। उनको खुट्टा को गति बाद में लाभांश को भुगतान को रूप मा उनले चेल्सी को अकादमी को सफलता को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तपाईंलाई थाँहा थियो?… हडसन ओडिडीले दुई एफए युवा कप र अंडर-एक्सएनएक्सएक्स प्रिमियर लीग खिताबको उपाधि लिने टोलीमा उत्कृष्ट भूमिका खेले।
पदक संग्रहमा ठूलो थप:
आफ्नो पदक संग्रहमा थप्दै, हडसन ओडिडी पनि इंग्ल्यान्डको अन्तर्गत 17 2017 विश्व कप टोलीको भाग थियो जुन विश्वकप ट्रफी जित्यो। उनले टूर्नामेंटको फाइनलमा दुई सहयोगी राखे जो इंग्ल्यान्डले स्पेनमा 5-2 लाई हिट गर्न दुई गोलबाट बरामद गर्यो।
तर, प्रसिद्धि उठाउनुहोस्
हडसन ओडिडीको बलियो 2018 / 2019 पूर्व सत्र प्रदर्शन एक आश्चर्य को रूप मा न केवल आकस्मिक दर्शकहरु को लागि, तर ज्यादातर उनको चेल्सी वरिष्ठ टीमहरु र नव नियुक्त मरिजियो सरी। त्यस समयमा उनको प्रदर्शनले आफ्नो क्यारियरमा मोटो मोडलाई संकेत गर्यो। तल हेर्नुहोस् भिडियो।
हडसन ओडिडी उनको 2018 / 2019 preseason शो पछि आफूलाई आफूलाई संग नजिक काम गर्ने सम्बन्ध सुरु गर्न पछि Sarri जसले उनलाई आगामी अभियानमा चेल्सा पहिलो-टोलीमा रहन मद्दत गर्यो।
जबसम्म 2018 / 2019 पहिलो-टोली समावेशको लागि प्रतिज्ञामा शङ्का लाग्न थाल्नुभयो, बायर्न म्यूनिख र रियल म्याड्रिडको युरोप क्लबका स्काउट्सहरूले उनीहरूलाई खेलाडी गर्न थाले। यसले बनायो Sarri आफ्नो प्रतिज्ञा संग बाकस। 2018 को अन्त को लागि, उनको सम्बन्ध फेरि हडसन ओडिडी संग आफ्नो मालिक को लागि वितरित संग खिलना शुरू भयो।
लेखन को समयमा, एक नयाँ अनुबंध तालिका मा हडसन ओडिडी को लागि गरिएको छ। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
यद्यपि त्यो युवा हुन सक्छ, तर कलम हडसन ओडिडी कसैले हो भने जसको रोमान्स सार्वजनिक आँखाको जाँचबाट बचाउँछ किनभने उनीहरूको प्रेम जीवन धेरै निजी छ वा सम्भवतः कम्तिमा अहिलेसम्म अवस्थित छैन।
तर, व्यक्तिगत जीवन
कलम हडसन-ओडिईको व्यक्तिगत जीवन जान्नको लागी तपाईंलाई तिनको पूर्ण चित्र प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ। कहिलेकाहीँ बस पिचमा नायकको हुडसन ओडिडीको लागि पर्याप्त छैन किनकी उनले एक पटक संगीतकारको टोपी को डन गर्ने प्रयास गरे।
एक थप व्यक्तिगत नोटमा, हडसन ओडिओ भनेको हो कि संसाधन र बहादुर हो। उहाँ धेरै सभ्य र निर्णायक हुनुहुन्छ र बलियो रहन मनपर्छ जबसम्म उनी आफ्नो क्यारियरमा सबैभन्दा उत्तम हुन्छ।
तर, पारिवारिक जीवन
लेखन को समयमा, हडसन ओडिडी उनको घाना परिवार मा नवीनतम दृश्य हो जुन दृश्य मा उभरने छ। प्रारम्भमा, यो सबै उहाँका बुबा र भाइको लोकप्रियताको स्थानमा रहेको थियो। हाल, यो स्पष्ट छ कि हडसन ओडिसी पहिले देखि नै उनको परिवारको सबै भन्दा मान्यता प्राप्त सदस्य बन्न सक्छ।
आफ्नो वृद्ध भाइको बारेमा:
ब्राडली, आफ्नो सानो भाइको विपरीत, उनी क्युममको उमेर हुँदा निराशाजनक क्यारियर थियो। यो एक समय थियो जब उनी प्राइम लीगमा बस्न गए।
उनी फुलहममा अकादमीमा हस्ताक्षर गरे तर यसले क्रेभोन कटेजमा आफ्नो पहिलो टोलीलाई कहिल्यै बनाएन। स्ट्राइकरले प्रिमियर लीगमा खेलेका थिए र गैर-लेग फुटबलको वरिपरि व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरे।
तर, अनियमित तथ्यहरू
घाना उच्च-प्रोफाइल मालिक:
माइकल एस्सेन, पूर्व चेल्सी एफसी खेलाडी र घाना अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी जो दुई प्रिमियर लीग खिताब र च्याम्पियन्स लीगको साथमा स्टामफोर्ड ब्रिजमा कलम हडसन ओडिडीको एक ठूलो प्रशंसक हो। एसेन एक पटक हडसन-ओडिइको इङ्गल्याण्डको अन्त-एक्सएनएमएक्स विश्व कपको विजय पछि इन्स्टाग्राममा ल्याइयो र उनीहरूलाई बधाई दिएका थिए। "सानो ब्रो".
यो अवलोकनले प्रश्न गरे कि माइकल एसेनन कलम हडसन ओडिओसँग सम्बन्धित छ।
उहाँले एक युरोपेली रेकर्ड राख्नुहुन्छ:
डीओपी ब्रिटिश-गायनियन व्हिज बच्चाले एक्सएनएनएक्सएक्स-युरोपियन युरोपेली रेकर्ड तोडेका थिए जब उनले9/ 2018 UEFA यूरोपा लीग समूह चरणमा पोकको विरुद्ध चेल्सी एफसीको गोल गरे।
क्युमम हडसन ओडिडीले प्रतियोगितामा स्कोर गर्न सबै युवा किशोर (18 वर्ष र 22 दिन पुरानो) बनेर पुल अजल सेट गरे।
विलियन एक पल्ट उनको एजेन्ट हुन पेश गरे:
क्युम हडसन ओडिडीको शेयर बढ्दै गएको छ, उनको चेल्सा टोली-साथी विलियनले आफ्नो एजेन्सीलाई अनुरोध गरेर एक अवसरमा ट्याप गर्न निर्णय गरे (दैनिक मेल एक पटक रिपोर्ट गरिएको)। चौंकाने निर्णयले ब्राजिलको कारणले संसारमा सबैभन्दा राम्रो र सबैभन्दा महान् खेलाडी बन्न पुग्यो।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो कलम होडसन ओडि बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य को लागी धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।
घाना फुटबल डायरी
4 सक्छ, 2017
एन'ग्लो केन्टा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य